Ego Dị Mkpa
Azụ azụ T-B3213TPU
Azụ azụ T-B3090USB
Akpa Crossbody T-S8093
Obere akpa T-S8080
Akpa njem njem T-N1018
Nkwupụta Dị Mkpa T-L5150
Akpa Crossbody T-L5102
Ndụ obodo mepere emepe nke oge a na-eme ka ejiji ejiji bụrụ ihe nlele nke ndị mmadụ. Ndị na-arụ ọrụ n'ọfịs ọdịnala na-eburu akpa na nnukwu akpa mgbe niile, nke na-abụghị naanị na-ara ara, kamakwa enweghị ike igosi uto ha. T-L5102, obere akpa ahu nke nwere udiri azumahia, aburula onye mbu ndi office.
Akpa Crossbody T-L5108
Nke a bụ akpa ejiri mee ihe na-eme mmiri. A na-ejikwa ihe Nylon mee ihe maka eriri ubu, a na-ahụkwa ihe ngosi Tigernu na eriri. Na-egosi ọkpụrụkpụ nke eriri ubu. Designmepụta akwa satin uhie dị n’ihu bụ isi ọrụ. Ejiri uhie na oji di ocha imeputa mmetụta nlele siri ike na ụdị egwuregwu.
Akpa akwa èbè bụ ihe na-abụkarị otu ihe eji eme ihe. Onu akuku na-eme ka akpa ahụ mara mma ma mara mma. Ihe dị iche bụ na enweghị mkpanaka dị na mpụga, mana mgbe emepere ya, enwere ihe karịrị akpa 10 n'ime, nke enwere ike iji chekwaa kọmputa tebụl 7.9 nke anụ ọhịa, ekwentị, batrị enwere ike iweghachi, laptọọpụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa kwa ụbọchị.
Akpa Crossbody T-S8060
Nke a bụ akpa akpụkpọ ụkwụ egwuregwu ịgba ọsọ. N’ihu ihu nke akpa ahụ nwere ọmarịcha slantres slant imewe, yana akwa TPU na-atụgharị na-eme ka mmetụta dị mma nke akpa ahụ dị, ma na-enwe mmetụta mgbochi mmiri. Akpa ahụ dum bụ ihe eji eme ka ọ dị ọcha, yiri cone. E jiri ya tụnyere akpa èbè ndị ọzọ, akpa a nwere nnukwu ikike, nke nwere ike ijide kọmputa mbadamba 9.7 inch, mesịa, wdg.
Akpa Crossbody T-S8097
Akpa a nwere ụdị ejiji na ejiji na-eto eto. Nke mbu, site na nhota nke nhọrọ agba, agba nke odo na-acha odo odo bụ nnukwu ihe itunanya. Na isi awọ gbara ọchịchịrị, ọ na-emepụta ụdị egwuregwu siri ike ma dị egwu. Njikọ nke khaki na isi awọ na-eme ka akpa a dị ka retro na obere igodo. Nchikota nke oji na oji na-egosiputa mmasi nke ice na oku. Ọ nwere ike mezue mkpa nke ụdị dị iche iche nke ndị na-eri ihe.
Akpa Crossbody T-S8085
Akpa nwata nwoke a dị mkpa pụrụ iche na ọdịdị dị ụtọ. Ke akpa ilekiri, ọ dị ka mmiri mmiri na brick. Lee nlezianya anya nke elu elu ahụ. N'ezie, ọ naghị esiri ike ịchọpụta na nke a bụ akpa emere maka football World Cup. Usoro ya dị n’egwuregwu bọọlụ na-ekwu maka ahịrị n’elu bọọlụ ahụ, kọmpị ya na-amasịkarị ụmụ nwanyị.
Akpa Crossbody T-S8061
Akpa ozi èbè a bụ ihe eji emechi ya na T-B3351. Shapedị ya yiri nke azu paaki, akwa ya kwa bụ otu. Ọ bụ ụdị ndị uwe Japanị gbara ọtọ. Akpa a na-ewu ewu na ndị na-azụ Japanese. Designkpụrụ okike ya dị mma nke ukwuu, a na-eji ọdịdị ya na ike ya rụọ ọrụ kachasị, ọ nwere ike ịnabata mbadamba 7.9 inch. O nwekwara ike ijide mesịa, akwụkwọ ndetu na ihe ndị ọzọ kwa ụbọchị.
Akpa Crossbody T-S8050
Pzọ ịchụ ego, ọdịdị nke ihe TPU na-ahụ anya na uru nke ịchekwa mmiri na-eme ka akpa ahu nke putara puta. Ogwe dị n'ihu na-eji ahịrị ogidi eme ka oghere nkịtị square ahụ dị ike.
Obodo Aiqun, Shanqian Rd, obodo nta Xinyang, Huadu Shiling, Guangzhou, China